HUAWEI MatePad 11 - HUAWEI Myanmar
*Keyboard နှင့် HUAWEI M-Pencil တို့ကိုအချို့သောမော်ဒယ်များတွင်သီးခြားရောင်းချပေးပါသည်။
အဆင်မြှင့်ထားသော feature များ
ပိုမိုတောက်ပပြီး မျက်လုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော မျက်နှာပြင်
စနစ်တကျရှိသော desktop အသစ်နှင့် HUAWEI MatePad 11 ၏အဆင်ပြေမှုကိုခံစားပါ။ ပိုမိုထိရောက်သော touchscreen သို့မဟုတ် mouse ကို အသုံးပြု၍ သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းများအားလုံးကိုကြည့်ရှုအသုံးပြုပါ။ မကြာခဏနှင့်မကြာသေးမီကအသုံးပြုခဲ့သောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ပြသပြီး app window တစ်ခုချင်းစီကိုဖွင့်စရာမလိုဘဲကြည့်ရှုရန် app icon များကိုကျော်ပါ။6
App Multipler က သင် screen တစ်ခုတည်းမှာ Multi-Window8ကြောင့် Apps ၄မျိုးအထိဖွင့်နိုင်ပြီး ထိုသို့ဖွင့်ထားနိုင်ထားနိုင်ချိန်မှာ Application တစ်ခုတည်း7အတွင်းရှိ အလုပ်နှစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ပြုလုပ်နိုင်သော Window Lock feature အသစ်ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် - သင့် email များကိုစစ်ရင်းနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့စကားပြောခြင်း၊ conference calls များမှာ လိုအပ်သည့် notes များကိုမှတ်သားထားနိုင်ခြင်းစတဲ့ သင့်အလုပ်နဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကို လိုအပ်သလိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကူးအိမ်မက်များကို လက်တွေ့ဘဝမှာ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဒုတိယမျိုးဆက် HUAWEI M-Pencil နဲ့ စတင်လိုက်ပါ။ ဖိအားသိနှုန်း ၄၀၉၆ အထိရှိပြီး ထိပ်ဖျားရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကောင်းကောင်း10 က ကိုယ်ချရေးလိုက်သမျှကို latency11 ၂မီလီစက္ကန့်မျှသာ ရှိတဲ့ အတွက် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေတယ်ဆိုတဲ့ အသိကို ခံစားမိစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံကြမ်းခြစ်ခြစ်၊ မှတ်စုမှတ်မှတ်၊ Message reply ပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဘက်စုံအသုံးချနိုင်ပါတယ်။
HUAWEI MatePad 11 နဲ့အတူ video editing studio လေးတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုများကို MatePad12 ပေါ်အလွယ်တကူ ကူးပြောင်းပြီး မျက်နှာပြင်ကျယ်ကျယ်ပေါ်မှာ သက်သောင့်သက်သာ edit ပြုလုပ်နိုင်မယ့်အပြင် HUAWEI M-Pencil နဲ့အတူ Special Touch13 များနဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ Doodles တွေလည်း ဗီဒီယိုမှာ ထည့်သွင်းရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
HUAWEI MatePad 11 ကို Laptop နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး secondary screen14 အဖြစ်လည်း အသုံးပြုုနိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Projects နှစ်ခုကို တစ်ပြိုက်နက်အလုပ်လုပ်မလား၊ Screen ပေါ်မှာ ဖိုင်အကူးအပြောင်းတွေ ရွှေ့မလား၊ ပိုမိုအလုပ်တွင်စေမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း Laptop Screen ကို MatePad ပေါ်မှာ Mirror လုပ်ထားပြီး သင့်ရဲ့ ဒီဇိုင်းပရောဂျက်တွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးရေးဆွဲလိုက်ပါ။
120 Hz refresh rate1 ပါဝင်တဲ့ HUAWEI MatePad 11 ပေါ်မှာ browsing ပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂိမ်းဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ချောမွေ့တဲ့ အမြင်အာရုံခံစားမှုကို ရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ DCI-P3 colour gamut15 ကြောင့်လည်း ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရာမှ စိုပြေတောက်ပ ရွှန်းလဲ့နေတဲ့ ရုပ်ထွက်ကို ရှုမြင်ခံစားစေနိုင်ဦးမှာပါ။
HUAWEI MatePad 11 ဟာ TÜV Rheinland dual certification5 ရရှိထားပြီး အပြာရောင်အလင်းတန်းများ ဝင်ရောက်မှုကို Display Mode ပြောင်းလဲခြင်းမပြုပဲနဲ့ကို သိသိသာသာ သက်သာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလင်းရောင်တိုးဝင်မှုကြောင့် မျက်စိပင်ပန်းတဲ့ ဒဏ်ကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေမှာပါ။
မတူညီတဲ့ နေရာလေးခုမှာ စပီကာလေးလုံးထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားပြီး Harman Kardon နဲ့ Tuned ပြုလုပ်ထားတဲ့ အားကောင်း၊ ပြတ်သားရှင်းလင်းတဲ့ အသံထွက်ကို HUAWEI MatePad 11 မှာ ခံစားလိုက်ပါ။
I noise reduction technology နဲ့ စာရိုက်သံ၊ ပြင်ပဆူညံသံ စတာတွေဖမ်းယူမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ မိုက်ခရိုဖုန်း ၄ခု ကို HUAWEI MatePad 11 မှာ တပ်ဆင်ပေးထားပြီး ကိုယ့်ရဲ့စကားသံတိုင်းဟာ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ အသံနဲ့ တစ်ဖက်ကို ဆက်သွယ်နိုင်စေမှာပါ။
ပူပင်မှုမရှိ တောက်လျှောက် အသုံးပြုနိုင်မှု
၁၂ နာရီအလုပ်အသုံးပြုမှုဘက်ထရီသက်တမ်းသည် Frame rate Adaptation နည်းပညာ16 ကြောင့် သင့်ရဲ့အလုပ်နေ့ရက်များကို စိတ်ပူစရာမလိုပဲဖြတ်သန်းနိုင်ပါသည်။ မယုံနိုင်လောက်အောင် ၁၂ နာရီ ဗီဒီယိုကို မနက်မှညအထိအပန်းဖြေနိုင်ပါသည်။16 ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော ဘဝကိုခံစားလိုက်ပါ။
Multi-Channel Intelligent Scheduling အင်ဂျင်က apps အများကြီးကိုလည်ပတ်နေတဲ့အခါ ပြီးမြောက်တဲ့အချိန်ကို လျော့ချပေးပါတယ်။ 7nm Qualcomm Snapdragon 865 chip က ချောမွေ့သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းပါတယ်။
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလွှမ်းခြုံမှု၊ ကောင်းမွန်သောအချက်ပြထိုးဖောက်မှုတို့အတွက် built-in ပါဝင်သည့် Wi-Fi6ပရိုတိုကောလ်နှင့်ပိုမိုတည်ငြိမ်သောကွန်ရက်ကို ရယူလိုက်ပါ။
HUAWEI M-Pencil နဲ့ HUAWEI Smart Magnetic Keyboard တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီး ပြန်လည်နေရာချထားပေးနိုင်သည့် layout နဲ့ မူပိုင်ခွင့်ရများပြားသောအင်တင်နာနည်းပညာတို့ကြောင့် တည်ငြိမ်သော ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်ကို ခံစားလိုက်ပါ။
သဘာဝကျတဲ့ ဂန္တဝင်ဆန်ဆန် အလှတရား
HUAWEI MatePad 11 မှာရွေးချယ်စရာ အရောင် ၃မျိုးရှိပါတယ်။ အထာကျတဲ့ Matte Grey ၊ နှစ်လိုဖွယ် Isle Blue နဲ့ စိုပြေတောက်ပတဲ့ Olive Green ဆိုပြီး ၃ မျိုးရွေးချယ်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး လုံးဝန်းတဲ့ ထောင့်စွန်းတွေ၊ ကိုင်တွယ်ရသက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေတဲ့ အထိအတွေ့တွေ နဲ့အတူ ဆန်းသစ်လှပနေမှာပါ။
1. မျက်နှာပြင်သည်အမြင့်ဆုံး Refresh rate ၁၂၀ Hz ကိုထောက်ပံ့ပြီး HUAWEI FullView Display သည် ‌ယေဘူယျ concept တစ်ခုဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့်ကျဉ်းမြောင်းသော bezels နှင့်မြင့်မားသော screen-to-body ratio ကိုရည်ညွှန်းသည်။
2. ပုံတွင်ပြထားသော stylus သည် HUAWEI M-Pencil (2nd မျိုးဆက်)ဖြစ်ပြီး HarmonyOS2သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Huawei တက်ဘလက်များတွင်သာထောက်ပံ့သည်။
3. Huawei Share သည်အချို့သော HUAWEI MatePad နှင့် HUAWEI MateBook များတွင် Multi-screen Collaboration ထောက်ပံံ့သည်။ System version နှင့်စက်များသည် တရားဝင် Huawei website ရဲ့လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရမည်။
4. HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, HUAWEI M-Pencil နှင့် mouse ကိုသီးခြားစီဝယ်ယူရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
5. မျက်နှာပြင်သည် TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် Flicker အခမဲ့အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ဒီထုတ်ကုန်သည်ဆေးကုသမှုရန်အတွက်မဟုတ်ပါ။
6. ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းသည် Apps များ dock station တွင်တည်ရှိနေမှသာအထောက်အပံ့ပေးပါသည်။
7. အချို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများသာဒီfeatureကိုထောက်ပံ့သည်။ ဖော်ပြထားသောပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။အမှန်တကယ် app အထောက်အပံ့နှင့် interface ကွဲပြားနိုင်သည်။
8. အချို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများသာဒီfeatureကိုထောက်ပံ့သည်။ ဒီ feature ကိုထောက်ပံ့ရန် developer ၏အစိတ်အပိုင်းတွင် app လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဆင်ပြေသောအက်ပလီကေးရှင်းများစာရင်းကိုနောင်တွင်ထပ်တိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသိရှိလိုပါက Huawei Customer Service ကိုဆက်သွယ်ပါ။
9. ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအချို့သော application များတွင်ကန့်သတ်ထားသည်။ အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုသည်တချို့သော အက်ပလီကေးရှင်းများပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
10. အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်မတူညီသော handwritingအက်ပလီကေးရှင်းများအရကွဲပြားနိုင်သည်။
11. အနည်းဆုံး2ms low latency ကို Jnots ကထောက်ပံ့သည်။ဒေတာများသည် Huawei ဓာတ်ခွဲခန်းများမှလာသည်။
12. ဒီ feature ကို EMUI10 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသော HUAWEI ဖုန်းများတွင်သာထောက်ပံ့သည်။အသေးစိတ်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
13. သရုပ်ပြရန်အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းမှာ Filmora Go HD ဖြစ်သည်။
14. ဒီfeature ကို HarmonyOS2(သို့မဟုတ်၎င်းထက်နောက်ကျသော)လည်ပတ်သော Huawei တက်ဘလက်များနှင့် PC Manager 11.1 (သို့မဟုတ်၎င်းထက်နောက်ကျသော)လည်ပတ်သော Huawei PCs အချို့မှသာထောက်ပံ့သည်။ နောင်တွင် ဒီ feature ကို model အများအပြားတွင် ရရှိနိင်မည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသိရှိလိုပါက Huawei Customer Service ကိုဆက်သွယ်ပါ။
16. ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်ဒေတာသည် Huawei ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များအပေါ်အခြေခံသည်။ ဘက်ထရီသည် ၁၂ နာရီကြာအလုပ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် Brightness level 200 nits တွင် 1080p video ကြည့်ရှုမှုများကိုထောက်ပံံ့နိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ဒေတာသည်ထုတ်ကုန်ပုံစံ၊ ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်း၊ အသုံးပြုမှုအခြေအနေများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။